Taxanaha Apple Watch 8 wuxuu cabirayaa heerka aalkolada dhiiga? - SmartMe
Waxa daabacay	 Paweł M.
Hawlaha caafimaadku waxay noqonayaan xubno aad muhiim ugu ah dhammaan saacadaha casriga ah iyo kooxaha. Waxay umuuqataa jiilalkii ugu dambeeyay ee Apple Watch inay ku qalabaysan doonaan xoogaa dareemayaal kacaan ah.
Sida ay noqotay, Apple waa mid ka mid ah macaamiisha furaha Britishka ee loo yaqaan Rockley Photonics. Daahfurkaan waxaa dhawaan shaaca ka qaaday The Telegraph. Shirkaddu waxay ku saleyneysaa waxqabadkeeda horumarinta dareemayaasha indhaha ee aan duuliyaha lahayn ee loo isticmaalo in lagu cabbiro xudduud caafimaad oo badan. Kuwaas waxaa ka mid ah, kuwa kale, cabbiraadda cadaadiska dhiigga, heerka gulukoosta iyo waxyaabaha ku jira aalkolada dhiigga. Astaamahan waxaa badanaa lagu gartaa iyadoo la adeegsanayo qalab caafimaad oo khaas ah.
Apple Watch oo leh astaamo caafimaad oo cusub?
Macluumaadka ku saabsan wada shaqeynta Rockley ee ay la leedahay shirkadda weyn ee Cupertino waxay la jaanqaaday soo shaac bixida sida uu ku bilawday Ingiriisku wadada uu ugu soo galayo Suuqa Kala Iibsiga ee New York. Dukumintiyada shirkadda waxay si cad u muujinayaan in Apple ay mas'uul ka tahay inta badan dakhliyadeeda labadii sano ee la soo dhaafay. Arrin xiiso leh, labada dhinacba waxay sidoo kale ku xiran yihiin qandaraas sahay joogto ah iyo horumar joogto ah.
Marka la eego horumarka Rockley Photonics iyo baaxadda weyn ee iskaashiga shirkadda Apple, hirgelinta seddexdan dareemayaal ee saacadihii ugu dambeeyay ee shirkadda fadhigeedu yahay Cupertino waa waqti uun. Ingiriisku wuxuu shaaca ka qaaday in dareemayaasha ay soo saareen ay ku dambayn karaan saacado iyo qalab kale oo la mid ah sanadka soo socda. Kormeerayaasha taxaddarrada leh waxay xiriir la leeyihiin bayaankan laga yaabo inuu yahay bandhigga taxanaha 8, oo aan ka filan karno 2022.
Baaritaanka gulukoosta dhiigga dabayaaqada sanadkan?
Sida ku xusan wararka xanta ah illaa iyo hadda, tusaalaha sanadka ee saacadda casriga ah ee ka socota Apple waxaan la kulmi doonnaa aaladda cabirka gulukoosta dhiigga. Si kastaba ha noqotee, warbixinnadii ugu dambeeyay, waxay muujinayaan in muuqaalkani uu arki karo oo keliya iftiinka maalinta ee moodooyinka sanadka soo socda. Waxa kale oo suurtogal ah in sanadka soo socda, Rockley uu qorsheynayo inuu sii ballaariyo tiknoolajiyaddiisa oo uu bixiyo dhiig kar iyo dareeraha la socoshada aalkolada dhiigga.